Chidzambwa bemoans absence of creative midfielders | ZBC News Online
Chidzambwa bemoans absence of creative midfielders
Zimbabwe national soccer team head coach Sunday Chidzambwa bemoaned the absence of creative central midfielders in the aftermath of Zimbabwe’s 1-nil defeat at the hands of Botswana at the National Sports Stadium Yesterday.
Zimbabwe appears to be struggling in that department at the present moment with the Warriors’ failure to break the Botswana defence in Wednesday’s 1-nil defeat indicative of the absence of creativity in the attacking third.
After watching his side get humbled by visiting Botswana in the Zimbabwe President Independence Cup on Wednesday, Chidzambwa was at pains in expressing disappointment at the absence of creativity in the centre of midfield.
Following Wednesday’s disappointing defeat, Chidzambwa pointed to the possibility of perhaps having to rely on wide play given the absence of players that can provide what some may term as the killer pass in the decisive phase of attack.
Stanford “Stix” Mutizwa, Lloyd Mutasa, Ronald “Gidiza” Sibanda are just some of numerous creative midfielders to come out of Zimbabwean football in years gone by.
PreviousHorror crash claims seven
NextUPDATED: Govt to revamp road, rail network
Bosso optimistic of regaining championship